Ungayibuyisela njani kwakhona iphone
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ungayibuyisela njani kwakhona i-iPhone
Ukuba ulungiselela ukuthengisa i-iPhone yakho okanye ufuna ukuyisula icoceke ngokupheleleyo, ukuseta kwakhona kumzi mveliso sisisombululo esikhulu.
Kodwa ukwenza njani ukuseta kwakhona kumzi-mveliso kwi-iPhone kwaye kuba kukho iindlela ezahlukeneyo kwimenyu yokuseta kwakhona, yeyiphi oyikhethileyo?
Sikubonisa ukuba ungayenza njani yonke le nto ngamanyathelo alula apha ngezantsi, jonga.
Kodwa kuqala, qiniseka ukuba uncedise yonke idatha yakho ebalulekileyo kwisixhobo sakho. Ukuseta umzi mveliso kuya kucima yonke into kwi-iPhone yakho kwaye awuyi kuba nakho ukuyifumana kwakhona, ke qhubeka ngononophelo.
Unale nto engqondweni, nantsi indlela oyicwangcisa ngayo i-iPhone:
Inyathelo # 1: Vula imenyu yokusetha kwakhona
Izicwangciso zokuqala ezivulekileyo, emva koko ufumane icandelo ngokubanzi kwaye uskrolele ezantsi ukuze ufumane i-Reset field
Vula Useto> Ngokubanzi> Cwangcisa kwakhona ukufikelela kwimenyu yokuseta kwakhona.
Okanye sebenzisa ibar yokukhangela izicwangciso
Okanye ungaya kuseto, skrolela ezantsi ukuveza ibar yokukhangela kwaye uchwetheze ukuseta kwakhona ukuya ngokukhawuleza kwimenyu
Ukuba awufuni ukuskrolela kwiimenyu, vula useto, emva koko uswayipha ezantsi ukuveza ibar yokukhangela kuyo, chwetheza 'ukuseta kwakhona'. Cofa kwisiphumo sokuqala esiza kukhangela, ukhetho 'lokuseta kwakhona' (eline-icon yegrey yegrey kwicandelo ngokubanzi).
Inyathelo # 2: Wazi umahluko phakathi kokukhetha kwakhona iindlela ezahlukeneyo
Ngoku uziswe ngeendlela ezimbalwa ezahlukeneyo. Nantsi into nganye ethetha ngayo:
Hlaziya lonke useto- oku kuseta ZONKE izicwangciso- kubandakanya useto lwenethiwekhi, isichazi-magama sekhibhodi, uyilo lwescreen seKhaya, useto lwendawo, useto lwangasese, kunye namakhadi e-Apple Pay (asuswe okanye aseta kwakhona kwiziphene zawo). Kubalulekile: Akukho datha okanye imithombo yeendaba icinywayo xa usebenzisa olu khetho!
Cima yonke imixholo kunye nezicwangciso- okanye ngamanye amagama, Hlaziya iFektri. Ukuba ufuna ukucima yonke into kwi-iPhone yakho (kubandakanya idatha kunye nemithombo yeendaba) kwaye uyilungiselele ukuthengiswa, lolu khetho unokukhetha.
Hlaziya useto lweNethiwekhi -Oku kuseta kwakhona iinethiwekhi zeWi-Fi kunye neepassword, useto lweselula, kunye nokuseta iVPN kunye neAPN okhe wasebenzisa ngaphambili.
Cwangcisa kwakhona ikhibhodi yesichazi- Ngaba ubusazi ukuba i-iPhone yakho igcina onke amagama amyoli owasebenzisayo na angekhoyo kwisichazi-magama esakhelweyo? Ewe, yonke loo mbali ineentloni ngegama lakho-lokudala inokuphinda isethwe kwakhona ukusuka apha.
Hlaziya ubeko lweScreen seKhaya- Oku kuyakuzisa iscreen sakho sasekhaya kwistokhwe sayo, okuthetha ukuba iya kulungelelanisa zonke iiapps zakho kwizikrini zakho zasekhaya kwaye ukuba wena kunye neapos uzenzile iifolda iya kukhubaza onke la malungiselelo.
Hlaziya kwakhona indawo kunye nokuBucala-Ukuba utshintshe ubumfihlo kunye nokuseta indawo kwezinye ii -apps okanye ngokubanzi, oku kuya kubazisa kwiziphene zabo.
Kuya kufuneka uchwetheze iphasiwedi yakho ukuze uqhubeke nokuseta kwakhona kwaye kungathatha ithutyana, kodwa emva koko uya kusetwa!
Eyona ipad ikhuselayo ikhuselekileyo
Esona sikhuseli silungileyo somnyele we-s9
Izipikha zeBluetooth ezingenazingcingo eziphathwayo (2021)
IGlass Buds Pro incede i-Samsung ukuvala isikhewu kwi-Apple kunye neeapos ze-AirPods kwiQ1 2021
Eyona matyala e-Samsung Galaxy S21 Ultra
Iziphumo zeCoronavirus: iVerizon, T-Mobile, i-AT & T, kunye ne-Sprint yokurhoxiswa kokurhoxiswa kunye nemirhumo yasemva kwexesha
I-Apple Watch Series 3, 4 kunye no-5 zitshiphu kunanini na ngoku
Uphando: Abathengi baphulukana nokuzithemba kwi-Samsung emva kokukhumbula kwe-Galaxy 7
I-LG Bukela i-Urbane kuthiwa iye eVerizon ukuthatha iMoto 360